Joomla CMS- စာမျက်နှာ3- MYSTERY ZILLION
မူလ › CMS › Joomla
LAMP နဲ့ Joomla ကိုချစ်တဲ့ Developer တွေမေ့ နေမှာစိုးလို့ ခုချိန်က Packt Publishing ပေးတဲ့ CMS Voting Season ကာလဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကရတဲ့ Award တွေ၊ ဒီနှစ်အတွက် ဇကာတင်ကျန်နေတဲ့ CMS တွေအကြောင်း Details ဖတ်ချင်ရင် ကျွန်တော် Site လေးမှာ လာဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ Joomla ကို Vote ပေးဖို့ မမေ့နေနဲအုံး။
Joomla Template ပြောငး်ချင်လို့ Wordpress လိုမျိုး Template ဖိုဒါထဲ ကိုသွားထည့်တော့ direct ထည့်လို့မရဘူးလို့့ပြောတယ် ...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ....သိတဲ့သူများ ကူညီပေးကြပါဦး..
ပြီးတော့ အရင်က Ftp software ကို FileZilla ကို သုံးနေတာ အဆင်ပြေတယ် ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စပြီး မရတော့ဘူး...ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး..အစ်ကိုတို့ရော အဆင်ပြေလား...ဘယ် Ftp software ကို သုံးကြလဲ ပြောပေးကြပါဦး....
EveningPrimrose wrote: »
Joomla မှာ Template ပြောင်းချင်တယ် ဆိုရင်
1) Admin Site(Backend) ကို login ဝင်လိုက်ပါ။
2) ပြီးရင် Installers -> Templates - Site ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Template ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ Install successful ဖြစ်တယ်ဆိုရင်
3) Site-> Template Manager-> Site Templates သွားလိုက်ပါ။ Site Template List တွေ မြင်ရပါမယ်။
4) ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Template ကို choose လုပ်ပြီး Default button ကို Click လိုက်ပါ။
Front End မှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Template အတိုင်း ပြောင်းသွား ပါလိမ့်မယ်။
ပုံနဲ့ တကွ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ POST မှာလာဖတ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် filezilla ကတော့ No Problem ပါပဲ
ကျွန်တော် အခု Joomla 1.5 သုံးပီး ဆိုက်တစ်ခုဆောက်ထားပါတယ်။
Joomla က သုံးလို့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် ပြသနာလေး နည်းနည်းရှိနေလို့ပါ။
ပထမဆုံးက Login လုပ်တဲ့အချိန်မှာ User Name ဖြစ်ဖြစ် Password ဖြစ်ဖြစ် မှားရင် ဘာမှ မပြောပဲ ဒီအတိုင်း ခုနပေ့ချ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီလို မှားတဲ့အချိန်မှာ မှားနေကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရပါမလဲ ခင်ဗျာ။
ဒုတိယက New Registration လုပ်တဲ့အချိန်မှာ User ကို ကျွန်တော်က Mail နဲ့ Activation လုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Registration Process ပီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Joomla က ဘာ Message မှ မပေးပဲ ပြန်ထွက်သွားတော့ User က Activation လုပ်ရမှာကို မသိတော့ပါဘူး။ အဲဒါလေးကိုလဲ ပြင်ချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ နည်းနည်းလောက် လမ်းပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
(အပေါ်က ပို့စ်တွေမှာ မမေးခင် ဂေါ်ဂယ်ဆိုလို့ ဂေါ်ဂယ်ပီးပါပီ၊ နောက်ပီး extensions.joomla.org ထဲမှာလဲ မွှေနှောက်ပီးပါပီ။ မတွေ့လို့ လာမေးတာပါ)
အဲဒီလို ဂေါ်ဂယ်ခိုင်းတဲ့အတွက်လဲ MZ က စီနီယာများကို အထူးပဲကျေးဇူးပါ။ Joomla ကို မြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာကတည်းက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ MZ ကိုရောက်လာတာပါ။ (လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်ကပါ။) အဲဒိကတည်းက မေးလိုက်တိုင်း ဒီက စီနီယာတွေသာ ဖြေရမယ်ဆိုရင် တော်တော်မလွယ်ပါဘူး။ အခုတော့ မသိလိုက် ဂေါ်ဂယ်လိုက်နဲ့ တော်တော်သိလာပါပီ။
thuria08 wrote: »
ကျွန်တော် Site မှာ အဲလို Problem မရှိပါဘူး။ မှားရင် ဒီလို Alert ပေး တယ်ဗျာ။ Incorrect username or password. Please try again.
ဒါကတော့ Setting နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ registration.php ထဲ နဲနဲ ပြင်ပေးရပါမယ်။ Registration ပြီးရင် user ကို message alert ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် Site မှာလာ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ Requirement ချင်းတူတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသား code ကိုပေးပါမယ်။
registration.php-> line 232 -> echo "<script> alert('You must activate the account by clicking on the activation link when you get the e-mail'); </script>\_n";
အဲဒီ တစ် line ထည့်ပေးလိုက်ရင် OK မယ်ထင်ပါတယ်။
Zack wrote: »
ကျွန်တော့ Site မှာ မရပါခင်ဗျာ၊ အချိန်ရရင် ကိုZack နည်းနည်းလောက် စမ်းပေးကြည့်ပါလား ခင်ဗျာ။ အောက်မှာက ကျွန်တော်သုံးနေတာကို joomla system info ကယူလာတာပါ။
PHP Built on: Linux p3slh166.shr.phx3.secureserver.net 2.4.21-53.ELsmp #1 SMP Wed Nov 14 03 : 54 : 12 EST 2007 i686
Database Version: 5.0.67-log
Joomla! Version: Joomla! 1.5.7 Production/Stable [ Wovusani ] 9-September-2008 23:00 GMT
နောက်တစ်ခုကလဲ ကျွန်တော်ပိန်းတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ စက်ထဲမှာ စမ်းဖို့တင်ထားတဲ့ joomla အော့ဖ်လိုင်းမှာရော အွန်လိုင်းမှာပါ registration.php ရှာလို့ မရပါခင်ဗျား။ :2: :2: :2: :2: :2:
ကျွန်တော့ Site မှာ မရပါခင်ဗျာ၊ အချိန်ရရင် ကိုZack နည်းနည်းလောက် စမ်းပေးကြည့်ပါလား ခင်ဗျာ။
သူရိယ Site မှာ ကျွန်တော် Testing လုပ်ကြည့်ပြီး ပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် login မှာ alert message မရှိပါဘူး။
သူရိယ လည်း ကျွန်တော် site မှာ user registration ကို test လုပ်ကြည့်ပြီးပြီပဲ။
တရားခံ ကတော့ joomla version ကွာနေလို့ပါ။ default ပါလာတဲ့ login module ကလည်း feature ချင်း ကွာပါတယ်။ ကျွန်တော် site က 1.0 version ကို base လုပ်ထားတာပါ။
registration.php ကိုရှာမရတာလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။ 1.0 နဲ့ 1.5 က physical structure ချင်းကွာပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် 1.5 ကပြသနာတော်တော်ရှာပါတယ်။ သူရိယ ပြသနာ ကိုရှင်းဖို့ local မှာ joomla 1.5 ကို install လုပ်ပြီး solution ကိုရှာပြီး ပါပြီ။ ဘယ်နေရာမှာ ပြင်ရမယ်ဆိုတာ သိသွား ပါပြီ။
line 552-> echo "<script> alert('Your Message'); window.history.go(-1); </script>\_n";
line 262-> echo "<script> alert('Your Message'); window.history.go(-1); </script>\_n";
အစဉ်ပြေမယ်လို့ ထင် ပါတယ်။ သူရိယ
web doctors တို့ရေ
joomla မှာ banner တွေ တင်တာ
website တစ်ခုက flash file (.swf) ဆိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်
တခြား site တစ်ခုကျတော့ /home/...../domains/........../public_html/administrator/popups/uploadimage.php လို့ error ပြပြီး ဘာ file မှ upload လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်. ကူညီကြပါဦး (
နောက်ပြီး banner တွေကို site ရဲ့ ဘေးမှာလည်း ပေါ်အောင်မလုပ်တယ်ဘူး :O
banner လှလှလေးတွေလုပ်ချင်တယ် နည်းလေးရှိရင်မျှပေးကြပါအုံး:67:\_:d/
ဒါမျိုး Banner လုပ်ချင်တာလား?
ဒီမှာ http://www.thadarphyu.net/joomzack/ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် လုပ်တဲ့ နည်းကိုပြောပြပါမယ်။
ဟုတ်ပါ၏..:d ဘေးဘက်မှာလည်း ဘယ်လိုထည့်ရလဲမသိဘူး:5:
ဒီ link လေးမှာ mod_flashmod ဆိုတဲ့ module ကို ယူလိုက်ပါ။ Default Banner Module က Flash ကို support မလုပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် support လုပ်တဲ့ module ကို install လုပ်ရတာပါ။ install လုပ်ပြီး Flash နဲ့ ဆိုင်တဲ့ parameter ကို ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဗျာ။
install လုပ်ပြီး Flash နဲ့ ဆိုင်တဲ့ parameter ကို ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဗျာ။
install လုပ်ပြီးသွားပြီ။ တုံးတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ဆို parameter ကို ဘယ်မှာပေးရမှာလဲ။ တွေ့ဘူး။
banner အတွက် template ရေးကတည်းက နေရာချန်ထားစရာလိုလား။ နေရာ အတိအကျ ချန်ထားရတာမျိုးလား။ site တစ်ခုက ရေးထားတဲ့စာတွေပေါ်မှာထပ်ပြီးပေါ်နေတယ်။ နေရာချန်ရမှာ ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာပြင်လို့ရမလဲ။
site ပေါ်ကို ဘာမှတင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ site က system info မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။
mambots/content/Unwriteablemambots/editors/Unwriteablemambots/editorsxtd/Unwriteablemambots/search/Unwriteablemambots/system/Writeable media/Writeablemodules/Unwriteabletemplates/UnwriteableCache Directory /home/kevin/domains/studenthub.sg/public_html/cache/Writeable
အဲဒါတွေနဲ့ ဘာမှတင်လို့မရတာနဲ့ ဆိုင်လား။ ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ ကူ စဉ်းစားပေးကြပါအုံး ။ တနင်္လာ မနက် တင်ရမှာ။ အဟီး။ မေးရတာတွေများတော့ အားနာလိုက်တာ.
ကို Jack ရေ ဂရုတစိုက်ဖြေပေးလို့ကျေးဇူးနော်....တကယ်..တကယ်
ဟုတ်ပါတယ် Banner အတွက် ကိုယ်သုံးမယ့် Template ရဲ့ index.php ထဲမှာ တစ်နေရာလုပ်ပေးရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလိုမျိုးပါ
<?php mosLoadModules('banner',-1); ?>
တချို့ Template တွေဆိုရင် default ပါလာပြီးသားပါ။
parameter ကတော့ admin site ကနေ Modules->Site Modules->The Flash Module ကို Click လိုက်ပါ။
1) Module Position က Banner ကိုရွေးရပါမယ်။
2) Parameter ထဲမှာ File Path နဲ့ File Name ကအရေးကြီးပါတယ်။ :68:
File Path က Flash file ရှိတဲ့ Location ပါ။
File Name ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Flash File Name ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ Banner နဲ့မဆိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ Hosting ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ folder ရဲ့ R/W permission တွေနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူလုပ်မပဲ ငါလည်း Jack ဖြစ်ရတော့တယ်။ :65: ပြီးရင် Queen တွေ၊ King တွေ မလုပ်နဲ့ အုံး။
sorry ပဲ Jack ရေ အဲ ယောင်လို့ ကို Zack ရေ typing Error ပါ ဖြေလည်းဖြေရသေးတယ်. နာမည်လည်းမှားသေးတယ်..ဟိ .ဟိ.စိတ်မဆိုးကြေး:103: စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်နော်။ မရရင်ထပ်ပြောမှာ..\_:D/
ကျွန်တော် Joomla ကို install လုပ်ပြီးတော့ သုံးကြည့်နေပါတယ်။ installation လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် admin page ၀င်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ admin page ၀င်လိုက်တိုင်း invalid session ဆိုတာပဲ ပေါ်နေတယ်။ home page ကနေ admin password နဲ့ ၀င်ရင်လည်း ရတယ်။ ဒါပေမယ့် admin page ကိုသွာလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ( ( (
mglukyaw wrote: »
admin page ၀င်လိုက်တိုင်း invalid session ဆိုတာပဲ ပေါ်နေတယ်။
ကျွန်တော် ထင်တာမမှားရင် session folder မရှိတာကြောင့်ပါ။
1) info.php ကို RUN လိုက်ပါ။
2) search for "session.save_path"
အဲဒီ location အတိုင်း folder create လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် အချိန်ရရင် ရေးပေးပါမယ်... အခုတော့ css စာအုပ်ပဲ အာရုံစိုက်နေလို့ဗျ....
http://www.mmopenlibrary.com/?p=379 အဲဒီစာအုပ်လေးလည်း ကောင်းပါတယ်..
လင့်ခ်တွေ မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင် ပြန်လုပ်ပေးလို့ရမလား
oraorange wrote: »
Building websites with joomla ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်တော့ ဒီနေရာ ကနေယူဖူးတယ်..
ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ link လေးမှာ YouTube ထဲက Joomla နဲ့ဆိုင်တဲ့ Learning Movie လေးတွေထဲက ကောင်းမယ်ထင်တာတွေကို တင်ပေးထားပါတယ်။ YouTube ကို access လုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေတဲ့ ဘော်ဘော် တွေအတွက်ပါ။ဘန်းကျော် လုပ်စရာ မလိုပဲ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ လေ့လာလို့ ကောင်းမယ့် Movie လေးတွေကို ဆက်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။
ကျနော့် စက်ထဲမှာတော့ joomla နဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုတော့ ဆောက်ပြီးသွားပြီ။ အဲ့ဒါကို upload လုပ်ချင်လို့။ domain က co.cc ယူထားတယ်။ hosting က 000webhost မှာယူထားတယ်။ ကိုယ့်စက်ထဲကဟာကို ဘယ်လို upload လုပ်ရမလဲဟင်။ ကူညီကြပါအုံးဗျာ။ လေ့လာစရာ Link တွေရှိရင်လဲပေးပါအုံးဗျာ။
သုံးရက်ရှိနေပြီ...ဟွန်း..ဘယ်သူမှလည်း reply လုပ်ကြဘူး...အနော်လည်းအဲဒါကိုသိချင်နေတာ..
MZ မှာရှာကြည့်တော့ ကိုစေတန် ကြီးရေးထားတာတစ်ခုတော့တွေ့ပါတယ်...ဒါပေမယ့်မရှင်းဘူးဗျ..:39:
ကို cfox21 ရေကျွန်တော်အကြံပေးမယ်...ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ co.cc နဲ့ 000webhost မှာပဲ
စက်ထဲမှာရေးထားတာ..ဘယ်လိုupload လုပ်ရမှန်းမသိလို့နောက်ဆုံးတော့ web ပေါ်မှာပဲ အစ
ကိုမိုးကကံကောင်းသေးတယ် ကျနော်ဆို မှတ်မှတ်ရရ မေးခွန်းဆယ်ခုလားမေးတာ။ တခုပဲဖြေပေးတဲ့လူရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ကိုးခုက ပလုံသွားရော။ အဲဒီတခုတောင် မိန်းကလေးတယောက် ဖြေသွားပေးလို့။
Joomla မှာ Customized ရေးကျတဲ့အခါ အချို့သော plug-in တွေကိုမသုံးပဲ ကိုတိုင်တည်ဆောက်ထားတယ့် Script, PHP file များကို တွဲ၍သုံးလို့ရပါသလား
သုံးလို့ရရင် ဘယ်လိုသုံးလို့ရပါသလဲ ခင်ဗျာ
User တွေအတွက် အသုံး၀င်သော Front End & Back End Extension များကောင်းရင်လည်း အကြံလေးများပေးကြပါ
ဘယ်လိုအသုံး၀င် ပုံနှင့် သုံးပုံသုံးနည်းလေးများလည်းရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်
web ပေါ်မှာလုပ်ရတာ စိတ်မရှည်လို့ပါဗျာ ... တစ်ခါတည်း ဆွဲတင်လိုက်ချင်လို့ ။ ကျနော်သိထားတဲ့နည်းအပြင်တခြားဘာနည်းလမ်းလေးများရှိမလဲလို့ ။ ကျနော်သိထားတာက joomla ကို အရင် install လုပ်တယ် 000webhost မှာ ပြီးတော့ config file တစ်ခုပဲချန်ထားပြီး အားလုံးကို replace လုပ်လို့တော့ ဖတ်ဖူးတယ် ( ဟုတ်မဟုတ်တော့ သိဝူး ဖတ်ဖူးတာပဲ) အဲ့ဒီနည်းလေးက အဆင်မပြေလို့။ တခြား အလွယ်နည်းသိချင်လို့ ။ module သုံးပြီး ဆွဲတင်တာမျိုးဗျာ ... xplore လို module မျိုးနဲ့ ဆွဲတင်လို့ရတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ cyber cafe ကနေ upload တင်တာကျတော့ အဆင်မပြေလို့။ အကြံပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ .... ကျနော်လည်း အစအဆုံးပြန်ရေးလိုက်တော့မယ် (
ကိုအိုင်းရေ ... အားမငယ်ပါနဲ့ ... ကျနော့် မေးခွန်းတွေလဲ မဖြေတာများပါတယ်။ မေးတောင်မမေးရဲဘူး ... ကြောက်တယ် ... အရမ်းအခက်ကြုံမှပဲမေးတယ် ... တကယ့်အခက်ကြုံလို့ မေးတာတွေ မဖြေတာများတယ် ( အားမငယ်နဲ့ ကျနော်လဲရှိသေးတယ်။ ...... အဲ့ဒီလိုပြောလို့ ဖြေပေးထားတဲ့သူတွေ စိတ်ဆိုးနေအုံးမယ် ချိတ်ချိုးနဲ့နော့်။ ကိုကိုတို့ မပါဘူး ဟိုလူကြီးတွေကို ပြောတာ
သူ့တို့ပြောနေပုံထောက်ရင်တော့ ငါမေးထားတာလဲအလကားဖြစ်ပြီပေါ့ ( ( ( (
:106: :106: ဘယ်လိုလုပ်၇တတော့မလဲ ဆ၇ာတွေရယ်ကယ်ကြပါအုံး :77: :77: :77: :77:
ရောက်ရောက်ခြင်း ဒီထဲကို တန်း၀င်လာပြီး မေးလိုက်ပြီဗျာ ...
ကျွန်တော်လည်း hosting တစ်ခု၀ယ်ထားပြီး Joolma1.5 ကို စမ်းသုံးကြည့်နေတာ။
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံလေးက Home,Music,Video,Culture,News,About ပါမယ်ဗျာ။
အဲဒီ Joolma ကို install တော့ လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ကျန်တဲ့ ဘာမှကို ဆက်မလုပ်တတ်တော့လို့ဗျာ။
XOPER ! ! ! !
ddieko wrote: »
ဘလော့တခုအတွက် ပထမဆုံး .. ဧည်သည်တွေ၀င်ရေးနိုင်အောင် ဆီဘောက်လို shoutbox တခုလိုပါတယ် .. Joomla extensions တွေထဲမှာ ajax shoutbox လို flash shoutbox လို ဆီဘောက်တွေရှိပေမယ့် .. Template တချို့နဲ့တွဲသုံးရင် သုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး .. ပြီးတော့ မြန်မာဖောင့်ပြင်ရင်လဲ backend မှာ သွားပြင်ရပါတယ် .. မလုပ်တတ်ရင် မလွယ်ပါဘူး ..
ကျွန်တော်ကတော့ လွယ်လွယ်ပဲ .. ဆီဘောက်တခုကို ကော်ပီကူးယူထည့်လိုက်တာပါပဲ :D..
အဲလိုမျိုး code တွေထည့်ဖို့ကိုတော့ joomla extensions မှာ .. Mod_HTML လို့ ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါ .. ဆိုဒ်တခုအတွက် အဲဒီလို code ထည့်ဖို့ module လေးတွေ ၃၄ ခုလောက်လိုပါတယ် .. အဲဒီမှာ ရှာလို့ရတာက mod_html, mod_php နဲ့ jumi ဆိုတာတွေလဲ ရှိပါသေးတယ် ..
ကိုယ်ရေးပြီးသမျှ အကြောင်းအရာတွေကို list လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .. Content list လို့ရေးပြီး ရှာကြည့်ပါ .. Module တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ် ..
ပြီးရင် ကျန်တဲ့ နာရီတို့ calendar တို့ .. အိုင်ပီတို့ လိုမျိုးတွေကိုလဲ ရှာလို့ ရနိုင်ပါတယ် ..
Google ad sense အတွက်တော့ အဲဒီမှာ safe click ဆိုတာတခုက ကောင်းပါတယ် .. ကိုယ့်ကွန်ပျုတာအိုင်ပီကိုဘလော့ထားတော့ .. ကိုယ့်ကွန်ပျုတာပေါ်ကနေ ad sense တွေကို မှားမနှိပ်မိတော့ဘူးပေါ့ .. Mod_php တို့လိုဟာတွေမှာလဲ ad sense code ကို copy လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် ..
နောက်တခုက မြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်ရင် .. admin backend ကို၀င် ကိုယ်ရွေးတဲ့ template CSS ကိုသွားပြီး ပြင်လိုက်ရုံပါပဲ .. Font နေရာမှာ .. Zawgyi-one လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့ .. ဒါဆို ဆိုဒ်မှာမြန်မာလိုမြင်ရပြီ .. ကိုယ်ရေးနေတဲ့ backend မှာ မြန်မာလိုပြင်ချင်ရင်တော့ admin template မှာသွားပြင်ပါ .. ဒါဆို ကိုယ်စာရိုက်ရင်လဲ မြန်မာလို မြင်ရပါပြီ ..
ဒါပေမယ့် content တွေမှာ မြန်မာလို ရေးလို့မရသေးဘူး .. အဲဒီတော့
Language manager မှာ ပြောင်းရပါမယ် . [ISO=вЂњiso_blabla вЂќ] ဆိုတာကိုရှာပါ .. အဲဒီ ISO_blabla ဆိုတဲ့နေရာမှာ UTF_8 လို့ရိုက်လိုက်ပါ .. ဒါဆို content တွေမှာက အစမြန်မာလို မြင်ရပါပြီ .. မြန်မာဖောင့် ဒေါင်းလုတ်မလုပ်ပဲသုံးချင်ရင်တော့ EOT လေးလုပ်ပေးလိုက်ရုံပေါ့ ..
ပြီတော့ template design တွေပြောင်းမယ် .. အပေါ်က banner ပုံပြောင်းချင်တယ်ဆိုပါတော့.. FTP software တခုခုကိုသုံးရပါမယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ cute ftp ကိုသုံးပါတယ် .. images subfolder မှာ template အတွက်သုံးထားတဲ့ image တွေရှိပါတယ် .. အဲဒီမှာသွားပြင်ပါ ..
ခုတော့ ဘလော့အတွက် ဒီလောက်ပါပဲ .. ကျန်တာတွေကို နောက်မှ ဆက်ရေးပါဦးမယ် .. နားမလည်ရင်လဲ မေးပါခင်ဗျာ вЂ¦
အကို ကျွန်တော် မရှင်းတာလေး တစ်ခုရှိနေလို့မေးပါရစေ ကျွန်တော် အကိုပြောသလို flash shoutbox နေရာမှာ ဆီဘောက်ကလေးကို အသာလေးကူးထည့်လိုက်ယုံလေးတင်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မရှင်းလို့။သူ့ကို ကူးထည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကူးထည့်ပေးရမှာလည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့် ကို အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးပါလား။နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်မြန်မာဖောင့် ပြင်ရာမှာ အကိုပြော သလို ISO_blabla ဆိုတဲ့နေရာမှာ UTF_8 ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဆီမှာက ကျွန်တော် ရေးတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာလိုမပေါ်ဘူး ဆိုဒ်မှာတော့ ပေါ်တယ်။ နောက်ပြီး အကြောင်း အရာတစ်ခုရေးတော့ မယ်ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်ပိုင်းကို မြန်မာလိုရေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ ကျွန်တော့် ကို အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးပါလား ကျွန်တော်က အခုမှ စလေ့လာသူမို့ပါ။အားလုံးကို ခင်မင် တတ်သူ တောသားလေး.....:77::77::77::77::77:
ကျနော်လည်း လမ်းကြုံဖောမယ်နော် ။ ဆီဗောက်ကို cbox.ws မှာ register လုပ်ပြီးကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လိုက်ပြင်။ပြီးရင်အဲဒီကပေးတဲ့ ကုတ်ကိုကော်ပီလုပ်ထားလိုက်။ နောက် joomla.org မှာ html module တခုရှာပြီး ဒေါင်းလိုက်။ ပြီးရင် install လုပ်။ module manager မှာ new နှိပ်ပြီး ခုနက install လုပ်ထားတဲ့ html module ကိုခေါ်လိုက်။ အဲဒီမှာ ခုနကူးထားတဲ့ cbox ကုတ်ကိုထည့်လိုက်ပြီး front page မှာကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာထားလိုက်တော့။ မြန်မာလိုမပေါ်တာက template မှာ administrator ရဲ့ css တွေထဲက font-family ကို zawgyi သုံးမယ်ဆို zawgyi တွေလိုက်ပြောင်းလိုက် ။ အိုကေတယ်။
ကျွန်တော် Joomla template ကို ဒေါင်းပြီးတော့ ပြင်ချင်တာ ..
php လည်းသွင်းထားပါတယ် ... ကျန်တာတွေတော့ မသွင်းရသေးဘူး ..
တကယ်လို့ template တွေပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် စက်ထဲမှာ ဘာတွေ ရှိရမလဲ .. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို နည်းနည်းပါးပါးလောက် ပြောပြကြပါဦးဗျာ ..
Apache web server, PHP and MySQL Database ရှိရပါမယ်။ template ကိုပြင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ html,css,php တို့ကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အတိုင်းပြင်လို့ အဆင်ပြေ ပါလိမ့် ခင်ဗျားးး။
ကို Zack ရေ ..
ကျွန်တော် Template ကို ပြင်ချင်နေတာနဲ့ php သွင်းလိုက်တယ် ... ကျန်တာတော့ မသွင်းရသေးဘူး .. ... hosting တစ်ခုတော့ ၀ယ်ထားတယ် .. အဲဒီ အပေါ်မှာ တက်မပြင်တတ်လို့ပါ။
အခု အစ်ကိုပြောသလို အားလုံး စက်ထဲကို သွင်းပြီးတော့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျာ ..
မရရင်တော့ နည်းနည်း ထပ်မေးဦးမယ်ဗျာ ..
XOPER ! ! ! ! !
xoper wrote: »
xampp သွင်းပါလား။ သူက apache, mysql, php သုံးခုစလုံး ပါပြီးသား နောက်ပြီး config တွေ ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စရာမလိုဘူးဗျ။
အစ်ကိုပြောတဲ့ xampp ကိုသွင်းပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် joolma template ထဲက index.html ကို ဖွင့်ရင် ဘာမှ မမြင်ရသေးဘူး။ ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတဲ့ template ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပြင်နေရင်းနဲ့ preview ကြည့်ချင်လို့ပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ပြင်လိုက်တဲ့ဟာရမှန်းမသိ မရမှန်း မသိ ဖြစ်နေလို့ပါ။
နည်းနည်း ဖြေပေးပါဦးဗျာ ...
XOPER !! !! !! !!
template folder အောက်က index.php တခုထဲ Run ကြည့်လို့ မရဘူးဗျ။ joomla admin site က အဲဒီ template ကိုရွေး ပြီးရင် front-end ကနေပြီး ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ template ကိုပြန်ကြည့် လို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုရင် template folder အောက်က index.php မှာ joomla framework ရဲ့ database ကနေ ဖတ်ပြီးရလာတဲ့ module position တွေကိုပြန်ပြီး ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူချည်းပဲ run လို့ အဆင်မပြေ ပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ ပြင်လက်စ template ကို active လုပ်ထားတယ်။ ပြင်ကြည့်ပြီးတိုင်း browser ကို refresh တစ်ခါလုပ်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ကြည့်နေရတာပါပဲ။ local မှာပဲ အဆင်ပြေမှာနော်... နောက်ထပ် ကောင်းတဲ့ နည်းလေး ရှိရင်လဲ ပြောပြ ပေးပါဦး..
တုံးတယ်ပြောလည်း ခံရတော့မှာပါဘဲ ...
ကျွန်တော်လိုချင်တာက Home, Culture, Music, Video, News, About us, Contact ဆိုတဲ့့ page တွေ လိုချင်တယ်။ news တွေကို လ အလိုက် စုစည်းထားချင်တယ်။ Muisc နဲ့ Video မှာဆိုရင် A-Z စီထားပြီး ပလေယာ ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဆောက်ချင်တယ်။
ကျွန်တော် Joolma 1.5 နဲ့ website တစ်ခု ဆောက်ချင်နေတာ template ကို စိတ်တိုင်းကျ မပြင်တတ်တော့ဘူး။ အဲဒါ အခကြေးငွေနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကူညီချင်တဲ့လူ ဖြစ်ဖြစ် ရှိရင် ကျွန်တော့်ဆီကို ပီအမ်ပို့ပေးကြပါ။
XOPER ! ! ! ! ! !
ကျွန်တော့်ပို့စ်လေးကို reply ပြန်ကြပါဦးဗျာ .....
တကယ့်ကို အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့ပါဗျာ ......
ဟုတ်ကဲ .. ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ .. ကျနော်က web developer မဟုတ်ဖူးလေ .. ကျွန်တော် သုံးဖူးသလောက်ကိုပဲ ပြန်ရေးနေတာပါ .. မှားတာရှိရင်လဲ ပြန်ပြင်ပါဦး .. ဆွေးနွေးရတာကောင်းပါတယ် .. :1:
web developer မဟုတ်လို့ပါပဲ. မြန်မာပြည်မှာက ညီလေး တ၀က်လောက်ပဲ သိအုံး တော်တော် *င်ခေါင်း ကျယ်နေကြပြီ ဒီမှာက ရေတွင်းထဲက ဖားတွေများတယ်:D:D:D
I wanna test free hosting in joomla help me!!!!!!!!!1